यौनका भोकाहरुले यो ठाउँलाई पनि शरीरको भोक बनाउने अड्डा बनाए !!! – News Nepali Dainik
यौनका भोकाहरुले यो ठाउँलाई पनि शरीरको भोक बनाउने अड्डा बनाए !!!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र १०, २०७७ समय: ७:३५:०२
अस्पतालको मुर्दाघरमा लाश राखिन्छन् । तर, यौनका भोकाहरुले यो ठाउँलाई पनि शरीरको भोक बनाउने अड्डा बनाए । पछिल्लो समय अस्पतालको मुर्दाघरमा भेटिएका जोडीहरुको तस्वीर बाहिरिएको छ । भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौरमा महाहराजा यशवंतराज अस्पतालका केही फोटो बाहिरिएका छन् । फोटोमा केही युवा र युवतीहरु आधा अधुरा कपडामा देखिएका छन् । यो दृश्य अस्पतालको मुर्दाघरको भएको बताइएको छ ।
यो मुर्दाघरको ठेक्का एक निजी अस्पताललाई दिइएको छ । फोटो सार्वजनिक गर्नेहरुका अनुसार यो कम्पनीका कर्मचारीले नै बिगत ४ दिनदेखि यहाँ युवतहिरु लिएर आइरहेका छन् । अस्पतालका कर्मचारीलाई यसको जानकारी दिइएको थियो तर अस्पताल व्यवस्थापन अन्जान छ । केही समयअघि यो मुर्दाघरमा एक वृद्धको शव १५८ दिनसम्म त्यत्तिकै रहेको थियो । त्यसपछि यसको रेखदेखको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिइएको थियो ।
मंगलबार राती केही व्यक्तिहरु लाश लिएर मुर्दाघर पुग्दा कोठामा युवतीहरु देखेर चकित परे । उनीहरुसँग केही युवकहरु पनि थिए । उनीहरुसँग सोध्दा उनीहरुले कडा रुपमा आफ्नो लाश राखेर जाउ भनेका थिए । त्यसपछि शव लिएर आएकाहरुले त्यहाँका केही फोटो खिचे । यो देखेपछि भने मुर्दाघरका कर्मचारी युवतीहरुलाई लिएर बाहिर आए । फोटो सार्वजनिक भएपछि फोटोमा देखिएका २ कर्मचारीमाथि कारवाही गरिएको छ । अस्पतालका अधीक्षक पीएस ठाकुरका अनुसार दुई कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको छ र कम्पनीलाई नोटिस पठाइएको छ ।
Last Updated on: March 23rd, 2021 at 7:44 am